Busquets oo ammaanay waxqabadka Ansu Fati ee Barcelona, isaga oo si cad u sheegay waxa uu u baahan yahay – Gool FM
(Barcelona) 28 Sebt 2020. Xiddiga khadka dhexe kooxda Barcelona ee Sergio Busquets ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii waynayd oo ay kooxdiisu ka gaartay xalay naadiga Villarreal.
Busquets wuxuu amaanay waxqabadka saaxiibkiisa yar ee Ansu Fati, kaasoo magaciisa ku qoray kulankii ugu horreeyay kooxdiisa Barcelona ay ka ciyaartay horyaalka La Liga ee kal ciyaareedkan cusub 2020/21, wuxuu dhaliyay labo gool, isla markaana wuxuu sabab u noqday rigooradii uu dhaliyay Lionel Messi.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Sergio Busquets kaddib ciyaartii xalay guusha ka gaareen kooxda Villarreal, wuxuuna yiri:
“Waxay ahayd ciyaar aad u wanaagsan, nidaamyadu way kala duwan yihiin waxaana jirta wada shaqeyn cusub oo inaga dhexeysa, dhamaanteena waxaan isku dayeynaa inaan la qabsanno sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, sii wadista guuleysiga waxay dhammaan na siinaysaa kalsooni”.
Intaas kaddib Sergio Busquets ayaa wuxuu u soo jeestay inuu ammaano saaxiibkiis Ansu Fati, wuxuuna yiri:
“Waa inaan dagenaan u muujino Waa inaan, waan ognahay xaaladihiisa, mana dooneyno inaan ku deg degno”.
“Waa inaan ka dhignaa inuu kubadda ku ciyaaro qaabkiisa, isla markaana aan ka faa’iideysano xaqiiqda ah inuu ku nool yahay waqti cajiib ah”.
Si kastaba ha noqotee, Barcelona ayaa xaaqday kooxda Villarreal oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, xilli Blaugrana ay gacanta ku dhigtay saddexdeeda dhibcood ugu horeysay horyaalka La Liga ee kal ciyaareedkan cusub 2020/21.